अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा हेडलाइन बनेको कर्पोरेट समाचारको नेपाल कनेक्सन
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन २७, २०७६, १७:४८
काठमाडौं- नयाँ दिल्ली डेटलाइनमा बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले सोमबार एउटा समाचार लेख्यो, 'भारतीय साझेदारसँगको विवाद कार्ल्सवर्ग छिटो टुंग्याउन चाहन्छ।' कार्ल्सवर्ग इन्डियाको वित्तीय विवरण र कारोबारमा शंका व्यक्त गर्दै उसका तीनजना बोर्ड सदस्यले वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय बजारमा काल्सवर्गको व्यापार र उसको सन् २०१८/२०१९ को वित्तीय विवरणका सन्दर्भमा अडिटर पिडब्लुसीका स्थानीय प्रतिनिधिले विवरण दिन अस्वीकार गरेको पनि समाचारमा जनाइएको छ।
गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादन गर्ने यो बियरले नेपाली बियर बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्छ। यसकाे भारतीय बजारमा बिक्रीका विषयमा कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षण एवं छानबिनका क्रममा कारोबार लुकाइएको आशंका गरिएको छ।
रोयटर्सको इमेलको जवाफ दिँदै कार्ल्सवर्गका कर्पोरेट अफेयर्स निर्देशक स्टिभ डेङले व्यावसायिक साझेदार (खेतान समूह)सँग अस्वाभाविक र अप्ठेरो व्यापारिक द्वन्द्व रहेकाे स्वीकार गरेकी छन्। 'यो हामी र संयुक्त उपक्रम साझेदारबीचको लगानीकर्ता विवाद हो, हामी यो विवाद छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा छौं,' डेङले भनेकी छन्।
यस विषयमा खेतान समूहबाट भने आफ्नो इमेलको जवाफ प्राप्त नभएको रोयटर्सले जनाएको छ। खेतान समूहबाट नै कार्ल्सवर्ग इन्डियाको सञ्चालक समितिमा राखिएका अन्य तीनजनाबाट पनि इमेलको जवाफ नआएको उसले जनाएको छ। खेतान समूहको तर्फबाट सिपी खेतानले प्रतिनिधित्व गर्छन्।
डेङले बिक्री प्रक्रियाका विषयमा अनुसन्धान सकेको र आन्तरिक प्रक्रियामा कडाइ गरिएको पनि बताएकी छन्। उनले आफ्ना कडा नीतिहरुका साथ थप अनुसन्धान अघि बढाइरहेको बताएकी छन्। यो कम्पनीले ७ अर्ब अमेरिकी डलरको भारतीय बियर बजारमा १६ प्रतिशत हिस्सा राख्छ।
को हुन् सिपी खेतान?
२०६८ साउन २ गते गोर्खा ब्रुअरीसँग रहेको कार्ल्सवर्गको ९० प्रतिशत सेयर बेचेपछि सिपी खेतान नेपाल कम बस्न थाले। सिपी खेतान अहिले भारत र सिंगापुरमा बस्दै आएका छन्। कार्ल्सवर्गको १० प्रतिशत सेयर अहिले पनि खेतान समूहसँग नै छ र राजेन्द्र खेतानले अहिले यो समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
गोर्खा ब्रुअरीले कम्पनीको ४ लाख २८ हजार ८०५ कित्ता सेयर ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा बेचेको थियो। तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत् सेयरमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको दोस्रो दिन कम्पनीको सेयर बिक्री भएको थियो। त्यतिबेलाको सरकारले कर्पोरेट सेयर कारोबारमा लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो।
खेतान समूह औपचारिक व्यापारमा प्रवेश गरेपछिको चौथो पुस्ताका सदस्य हुन् सिपी खेतान। किशुनराम खेतानबाट सुरु भएको खेतान समूहको व्यापारको चक्र पूर्णमाल बिहारीलाल खेतानले सम्हाले। उनको पालामा खेतान समूहको व्यापार भारतसम्म विस्तार भएको थियो।
उनका दुई छोरा थिए। मोहनगोपाल खेतान र हरि खेतान। मोहनगोपाल खेतानका दुई छोरा छन् भने हरि खेतानका एक। मोहनगोपालका दुई छोरा हुन् राजेन्द्र खेतान र चन्द्रप्रकाश (सिपी) खेतान। हरि खेतानको कम उमेरमै निधन भएपछि उनका छोरा प्रेमप्रकाश खेतान (पिपी)को रेखदेखको जिम्मेवारी पनि मोहनगोपालले गरे।
खेतान समूहसँग निकट रहेका व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो समय सिपी खेतानको दाजु राजेन्द्रसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। पारिवारिक द्वन्द्वमा सिपी र पिपी एकातिर छन् भने राजेन्द्र अर्कोतिर।
नेपालमा पनि विवादित!
गोर्खा ब्रुअरीको एउटा ठूलो कर विवाद अहिले पनि अदालतमा छ। कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा बियर उत्पादनका क्रममा सीमाभन्दा धेरै जर्ती दावी गरेको भन्दै भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत जेठमा ८८ करोड रुपैयाँ अन्त:शुल्क राजस्व निर्धारण गरेको थियो। कर कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको ब्याज र जरिवानासमेत गरेर कर निर्धारण गरेको थियो।
यो विषयमा कम्पनीले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गर्‍यो। उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् कम्पनीलाई 'साथ' दिएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च अदालतको आदेशमाथि सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गर्‍यो। सर्वोच्चले करको जिकिर सदर गर्दै उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मात्रै उल्ट्याएन न्यायाधीशमाथि कारबाहीको सिफारिस नै गरिदियो।
के-केमा छ खेतान समूहको लगानी?
खेतान समूहले अहिले गोर्खा ब्रुअरी, हिमालयन स्न्याक्स नुडल्स, बोटलर्स नेपालसहित लक्ष्मी बैंक, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्छ। यसैगरी हिमालयन बैंकमा पनि यो समूहको राम्रो उपस्थिति छ।
यसैगरी लक्ष्मी माइक्रोफाइनान्स पनि यही समूहले सञ्चालन गरेको छ। म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, हिमालयन पेट्रोकेमिकल्ससहितका कम्पनीमा खेतान समूहको लगानी छ।
३ दिनमै सुन प्रतितोला १९ सयले घट्यो